Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi | China Zvigadzirwa Fekitori
Welded Wire Mesh chakagadzirwa yepamusoro yakaderera kabhoni simbi waya mutsara kutenderera, uye ipapo inopisa yakanyorova kwakakurudzira, PVC zvemapuranga epurasitiki pamusoro plasticizing kurapwa.
Kuti usvike pa mesh pamusoro yakati sandara, yunifomu pajira riya, yemunharaunda machine mashandiro akanaka, akatsiga, akanaka mamiriro ekunze kusagadzikana, yakanaka ngura kudzivirira.
Welded waya pajira riya maitiro:
* Hot wakanyika kwakakurudzira mushure kuruka.
* Kupisa kwakanyudzwa kwakakurudzira usati waruka.
* Electro kwakakurudzira mushure kuruka.
* Electro kwakakurudzira pamberi kuruka.
* PVC zvemapuranga.
* Simbi isina ngura.
Zvishongedzo zvakagadzirwa nesimbi yakakosheswa uye hupfu hwakavezwa zvichivaita zvinodzivirira uye zvinogara kwenguva refu.
Iyo fenzi ine yakapetwa pamusoro yekushongedza, girini yemavara epurasitiki yakavharwa pane kwakakurudzira waya, Inonyanya kushandiswa kurongedza gadheni.
Zvinyorwa: Mae emhando yepamusoro yesimbi waya.
Processing: Weaving uye Welded
Chigadzirwa mabhenefiti Anti-ngura, zera kuramba, kupenya kwezuva chiratidzo, nezvimwe
Fenzi yemunda inogadzirwa nemasimba akakwirira kwakakurudzira simbi waya. Ndiyo fenzi yakanakisa yekudzivirira huswa, masango, mugwagwa mukuru nenzvimbo.
Hwakawanda kukura kwesikwere dhizaini, inonyanya kushandiswa rwizi, kubhengi kutsetsereka, Inogona kudzivirira rwizi rwizi kuti rusakanganiswa neazvino, mhepo nemafungu.Pakuvaka kwacho, keji izere nematombo zvigadzirwa, izvo zvinoumba zvakakosha zvinhu neyakagadziriswa mamiriro uye yakasimba kubvumidzwa, inoenderana nekusimudzira kukurumidza kukura kwezvisikwa zvirimwa.
Square Wire Mesh rakagadzirwa kwakakurudzira simbi waya kana Stainless simbi waya, zvinonzi nevakawanda kushandiswa mumaindasitiri uye zvakagadzirwa kuti nesefa upfu zviyo, Sefa mvura uye gasi zvimwe zvinangwa kufanana vakachengeteka varindi pamusoro michini yakavharwa.
Square Wire Mesh mhando:
Hexagonal Wire Mesh inoshandiswa kudyisa huku, madhadha, hanzi, tsuro uye fenzi ye zoo, nezvimwe.
Inogona kuve yakagadzirirwa gabion bhokisi - chimwe chezvinhu zvinozivikanwa waya zvigadzirwa zvemafashama ekudzivirira. Ipapo matombo anoiswa mukati mayo. Kuiswa kwe gabion kunoita madziro kana bhengi pamvura nemafashama. Stainless Simbi Hexagonal Wire Mesh inosungirirwawo mune yehuku netting yekuberekesa huku uye dzimwe huku.
Masuo anogadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu uye nzira dzekutema. Welded isati yavhara yekudzivirira kwepamusoro kubva pamamiriro ekunze neiyo imwecheteyo ngura yekushomeka semapaneru efenzi. Masuwo edu anosanganisira zvemhando yepamusoro uye zvinogara zvakaomarara uye zvakasiyana siyana zvekukiya kuti zvienderane nekushandisa kwakasiyana.
Mhando dzeGadhi reBindu:
* Rimwe bapiro regedhi.
* Akaviri mapapiro gedhi
Yakajairika Chipikiri Dhayameter: 1.2mm-6.0mm Kureba: 25mm (1 inch) -152 mm (6 inches) Chinyorwa: Q195 Surface kurapwa: Yakakwenenzverwa, Zinc Yakafukidzwa / Nhema Zinc Yakaiswa Kurongedza Kurongedza: 1.Pazhinji 2. Iyo yezvinhu kurongedza 3 Kutakura kurongedza: makatoni e25 kg / CTN, nezvimwewo 4. Maererano nechikumbiro chevatengi. Concrete Nail Dhayamita: 1.2mm-5.0mm Kureba: 12mm (1/2 inches) - 250mm (10inches) Chinyorwa: # 45 simbi Surface kurapwa: Zinc, Nhema Zinc Yakafukidzwa / Nhema Zinc Yakaiswa Kurongedza kurongedza: 1 ....
Icho chiri mutakuri wekukwira wemiti yemizambiringa ine miti uye kukwira mahebhu. Inoshandiswa zvakanyanya muzvivakwa zvekudyara, kudyara masisitimu, zvirimwa zvemukati zvine poto, maruva egadheni uye kugadzirisa nzvimbo nekuda kwekushanduka kwayo uye kwakasiyana kushandiswa, kusimba, kukotama nechimiro uye kukotama neyakajairwa.
Fence posvo: Fence mbiru dzinoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzekunze mapurojekiti kubva pamatavi kusvika kumadziro.
Mhando yepositi: Euro post, T post, Y post, U post，Nyeredzi nyeredzi.
Euro Pipe Post ndizvo Kugadzirwa kwetenderedzwa chubhu, kwakakurudzira uye upfu hwakaputirwa negirini RAL6005.
Yakavhurika waya rudzi rwekuzviparadzanisa uye hwekuchengetedza mambure akaumbwa nenzira dzakasiyana siyana dzekuruka nekukomberedza waya wakakomberedzwa pane huru waya (tambo) nenzira yemuchina wewaya.
Nzira yekumusoro yekurapa yakavezwa uye PVC mapurasitiki akaputirwa.
Kune matatu marudzi erwambo rwakakoswa:
* Imwe yakamonana waya yakakoswa
* Yakapetwa kaviri yakakoswa waya
* Tsika dzakamonyoroka waya wakachekwa